देउराली यातायात प्रालि अर्घाखाँचीले ७३ लाख बराबरको राहत वितरण गर्ने | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ असार ५ गते ०६:३१
साथै प्रालिमा आवद्ध भई सञ्चालनमा आएका १४३ सवारी साधनका सम्बद्ध सबैलाई राहत वितरण गरिने छ । प्रालीले गाडि धनिलाई ४३ हजार, चालक लाई ५ हजार, सहचालकलाई २ हजारका दरले राहत दिने भएको छ । त्यस्तै कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ती ५ पाँच हजारका दरले राहत दिने निर्णय गरिएको छ।
देउराली यातायात प्रालिले गतवर्ष पनि आफू मातहतका सवारी धनिहरुलाई ५० हजारका दरले राहत वितरण गरेको थियो भने जिल्लाका सवै स्थानिय तहलाइ १र१ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो । अर्घाखाँचीमा यातायात क्षेत्रमा देउराली यातायात पुरानो यातायात व्यवसायी समुह हो ।
देउराली यातायातले जिल्लाका हरेक ठाउँका जनतलाई दुःख सुखमा सेवा गरेको संस्था हो । २०६१ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले गाउँका सबै ठाउँमा पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस संस्थासँग अहिले जिप, हाईस, मिनि बस गरेर १४३ वटा सवारी साधन रहेका पत्रकार हिम जिसी (लेकाली)ले बताए ।
मेगा बैंकले वित्तीय बजारमा छुटै पहिचान र ब्राण्ड बनाउन सफल भएको छ– अध्यक्ष शाह
२०७८ श्रावण ७ गते ०७:०१
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड ११ बर्ष पूरा गरी १२ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । ११औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी ५ बर्षका लागि पाँच बर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले जानकारी दिए । ‘हामीले हलोदेखि हाइडोसम्मको नारा र अभियानका साथ बैंक स्थापना गरेका थियौं, सोही अनुरुप सबैभन्दा बढी चुक्तापुँजी र शेयरधनी भएको बैंकको रुपमा मेगा बैंक स्थापना भयो । त्यही मौलिकतालाई आत्मसात गर्दै हामीले नयाँ रुपमा बैंकलाई अगाडि बढाउने रणनीति तयार गरेका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने– ‘राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेको कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग कर्जाका साथसाथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रबर्धन गर्ने, उत्पादनमुलक तथा रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा मेगा बैंकको लगानी केन्द्रीत गर्छौं ।’
ग्रेट वाल मोटर्सका तीन नयाँ मोडेल नेपाली बजार
२०७८ श्रावण ४ गते ०९:१३
काठमाडौं । ग्रेट वाल मोटर्स नेपाली बजारमा तीन नयाँ मोडेलका गाडीहरुको साथमा प्रवेश गरेको छ । उच्च गुणस्तरयुक्त प्रविधि, उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन तथा आरामदायी सवारका लागि ग्रेट वाल मोटर्सका गाडीहरु पर्यायवाची नैं बनिसकेका छन् । नेपालको अटोमोटिभ डिलरशिप क्षेत्रमा विविध अनुभव बोकेको बिशाल ग्रुपको सहायक संस्था भी.जी. इम्पेक्स प्रा.लि. नेपालमा ग्रेट वाल मोटर्सका लागि आधिकारिक विक्रेता हो । विभिन्न क्षेत्रहरुमा सफलता संगालेको अनुभवलाई उपयोग गर्दै भी.जी.इम्पेक्सले जिडब्लुएम सँग सहकार्य गर्दै अहिले दुईवटा एसयुभि र एक पिक–अप मोडेल बजारमा ल्याएको छ । यी तीनै वटा गाडी आफ्नो समूहमा नौलो र उत्कृष्ट रहनेमा कम्पनी विश्वस्त छ ।